Sidee Loo Sameeyaa Ey Yar 2 Toddobaad Gudahood (Si fudud & Oohin la'aan) - Tababarka Eyga
Sidee Loo Sameeyaa Ey Yar 2 Toddobaad Gudahood (Si fudud & Oohin la'aan)
Maalintii ayaa ugu dambayntii laguugu yimi inaad guriga ku soo dhaweyso eey.
Marka eeygaagu guriga yimaado, ciyaarta iyo dejinta nidaam caadi ah ayaa ah laba ka mid ah hawlahaaga ugu horreeya!
Qayb muhiim ah oo ka mid ah aasaasida jadwalka ayaa ah iyaga oo baraya inay si tartiib tartiib ah ula qabsadaan xilliyada ay kaligood jiri doonaan.
Halkani waa meesha ay ku tababbarto sariirta eygu.
Sanduuqa ayaa siiya eygaaga meel aamin ah oo aamin ah oo loo adeegsan karo in si dhakhso leh loo dardar geliyo jabinta guriga (inbadan oo ka hooseeya).
Tababbarka sanduuqa waa in si tartiib tartiib ah loogu sameeyaa farsamooyinka saxda ah, haddii kale eeygaaga yar wuxuu noqon karaa mid walwalsan, wareersan ama ku dhici kara walaac kala soocid ...
Tallaabada Tilmaamaha Tallaabada
Sida loo Ekeeyo Eygaaga Tababar
Maalmaha 1-2: Markii ugu horreysay sanduuqa
Maalmaha 3-6: Kordhinta Waqtiga saxanka
Maalmaha 7-11: Waqtiga Koowaad Kalidaa
Maalmaha 12-14: Ka Bixitaanka Guriga
Maalmaha 14+: Tababbarka Sanduuqa Habeenkii
Xeerarka Dahabka ah
Jadwalka Tababbarka Sanduuqa
Waa maxay Tababar sanduuqa? (Guudmarka)
Tababbarka sanduuqa ayaa ah tartiib tartiib tartiib tartiib ah oo loo barayo eeygaaga inuu dego oo ku nasto waxyaabaha ku jira qalinka.
Waa muhiim adiga tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u yeel .
Si tartiib tartiib ah ugu tababbarto xawaaraha eeyahaaga, aad u dhakhso badan waxayna baran karaan inay necbaan. Calaamadaha aad dhaqso ugu tababbaray sanduuqa waxaa ka mid ah:
Diiday in aan galo.
Waqtiga ay qaadaneyso in eey tababarto eygu wuxuu noqon karaa meel kasta laga bilaabo maalin ilaa bil . Eeyaha qaarkood ayaa kalsooni qaba oo xasilloon laga bilaabo maalinta 1, halka kuwa kale ay u baahan doonaan caawinaad dheeraad ah. Eeyaha badankood waxaa lagu tababari karaa sanduuq labo toddobaad gudahood.
Markii aad bilowdo tababarka sanduuqa waxaa fiican inaad ka fikirto inay u baahan doonaan caawinaad dheeraad ah ayna hirgeliyaan barnaamij tababar tartiib tartiib ah.
Tani waxay iska ilaalin doontaa halista eeygaaga yar oo aan jeclayn.
Su'aal guud oo nala waydiiyo ayaa ah: ma naxariisdarro baa in eey la shiido eeyaha habeenkii?
Jawaabtu waa ku xiran tahay.
Haddii eeygaagu helo meel badan, wuxuu awoodaa inuu si fudud u beddelo booska oo uu waqti gaaban ku qaatay qalinka maalintii ka dib marka aad cuncayso eeyahaaga habeennimo ma aha mid naxariis darro ah waxayna hubin doontaa inay nabad qabaan inta ay seexdaan iyadoo aan la ilaalin.
Maxay Tahay Inaad Ereygaaga U Tababbarto Eygaaga?
Faa'iidooyin badan baa ku jira in eeyaha wax lagu daweeyo eeyaha:
Waa meel amaan ah oo eygaagu dib ugu gurto markuu daallan yahay.
Waxay ka caawisaa sidii loo ilaalin lahaa iyaga marka aan kormeer buuxa la bixin karin.
Waxay ka hortagtaa ku dhaqanka ficillada aan la jeclayn (tusaale ahaan, calaliinta) markii aan la ilaalin.
Waxay siisaa soohdin cad carruurta inay fahmaan goorta aysan la dhaqmayn eeyga.
Waxay dardar gelineysaa wada shaqeynta guriga maadama oo eeydu u dhowdahay inay musqusha ku ag dhowaadaan sariirtooda.
Waxay u diyaarisaa dhallaanka loo yaqaan 'vet stay' maadaama dhakhaatiirta xoolaha oo dhami ay eeyi doonaan qalliinka ka hor iyo ka dib.
Maxay Tahay Inaad Ogaato Kahor Iibsiga Sanduuqa
Waxaa jira noocyo badan oo sanaadiiqda eyga ah oo la heli karo. Waxa ugu horreeya ee laga fikiro waa cabirka. Waa muhiim inaad hubiso inaad heshay cabbirka saxda ah eey yar ( Xusuusashada si dhakhso leh ayey u koraan ).
Waxaad u baahan tahay inaad hubiso in eeyahaaga ay si xor ah u dhaqdhaqaaqi karaan iyo inay ballaaran ku filan tahay: sariir, baaquli biyo ah, alaabada carruurtu ku ciyaarto iyo meel ay ku cunaan cuntooyin.
Haddii aad qaadanaysid nooc ballaaran, dooro sariir ay ku jiraan qaybo kala qaybsan si aanad u iibsan sanduuqyo badan sida eygaagu u korayo.
Ku xigta, qalab iyo dhisid tayo leh.
Waxaa jira afar qalab oo waaweyn: bir, caag, dhar, iyo alwaax. Dharka ayaa sida caadiga ah ugu jaban halka biraha iyo balaastiguba ay qaali yihiin.
Waa muhiim in la tixgeliyo walxaha ay ka sameysan yihiin santuuqa, gaar ahaan noocyada jecel in la calaliyo. Sidoo kale, agabyada qaarkood ayaa sidoo kale ka fudud nadiifinta kuwa kale; Waxay u badan tahay in mar uun eygaagu ku musquli doono qalinkooda.
Birta iyo balaastigga waa sahlan tahay in la nadiifiyo haddii shilal dhacaan. Birta iyo dharka ayaa u roon xayawaanka socdaalka ah maxaa yeelay way deg deg badan yihiin wayna sahlan yihiin in la laalo.
Ugu dambeyntii, tixgeli habka qufulka . Sanduuqyada birta iyo balaastigga ah waxay ku siiban karaan dul-qabsasho dhan walba oo ay adag tahay in la furo, halka sanaadiiqda dharka ay u eg tahay inay adeegsadaan siib.
Siibbaartu aad ayey ugu fududahay eeyadu inay xoqaan ama ay calaliyaan.
Sida Loo Sifeeyo Ey Yar: Talaabo Talaabo ah
Ey yar oo jiifta qalinkooda agtiisa.
Tallaabada 1: Waqtiga Koowaad ee Sanduuqa (Maalmaha 1-2)
Waxaa muhiim ah ka hor intaadan bilaabin tababarka santuuqa in sanduuqa si sax ah loo dejiyo.
Hubso inaad dejisay markii eeygaagu aanu joogin isla qolka maadaama uu sameyn karo buuq badan oo cabsi gelin kara iyaga. Maalmaha ugu horreeya, albaabka u xir si uusan u xidhi karin oo u karin karin eeyahaaga!
Sanduuqa ku dheji aag ka mid ah gurigaaga halkaas oo aad si joogto ah waqti ugu qaadato, laakiin ka baxsan jidka socodka iyo qolalka mashquulka badan ama buuqa badan.
Geeska qolka fadhiga ayaa ku habboon.
Hubso inay tahay sida ugu macquulsan. Dhig buste jilicsan iyo xoogaa toy ah oo ku dabool buste weyn si aad u dareento god.
Khibaradaada uhoyeeya ee ugu horeysa ee sanduuqooda waa inay la xiriirtaa waxyaabo runtii wanaagsan.
Ku daadi raad daaweyn ah oo ka soo baxa banaanka santuuqa una gudba gudaha.
Kadib eeyahaaga u daa qolka una oggolow inuu wax baaro oo wax cuno.
Markuu helo daawooyinka hadal ahaan ugu ammaan inuu sidaa sameeyo.
U fiirso sida eygaagu u eg yahay markii ugu horreysay ee uu baadho qashinka. Miyuu marayaa jidkiisa isagoo si kalsooni leh u raacaya cuntada, mise waa mid ku habboon oo taxaddar leh?
Daawashada afkooda waxay ku siin doontaa tilmaamo markaad u gudbi karto heerka xiga ee tababarka sariirta. Waxaad dooneysaa eeygaaga yar inuu si farxad leh u socdo!
Si goosgoos ah maalintii oo dhan (marka eeygu aanu eegin) ku rusheeyaa daaweyn badan sanduuqa.
Eygaaga ayaa u fikiri doona in sanduuqoodu yahay kan wax siiya ee sixirka wax u kala bixiya, waana inuu bilaabaa waqti badan iyo inuu kalsooni badan ku yeesho.
Kaliya mar ay si joogto ah u raadinayaan inay 'hubiyaan' dawaynta, oo si ku habboon mararka qaarkood ugu nastaan ​​halkaas, waa inaad u gudubtaa inaad u tallaabato 2.
Tani waxay qaadan kartaa 1 maalmood, ama waxay qaadan kartaa laba ama saddex maalmood. Si dhow u ilaali eeyahaaga!
Tilaabada 2: Kordhinta Waqtiga Saxanka (Maalmaha 3-6)
Waa inaad si tartiib tartiib ah u higsato inaad kordhiso waqtiga eeyahaaga ay ku qaataan sanduuqooda.
Marka eydaadu kalsooni ku qabato oo ay ogaato dawooyin badan oo 'qarsoodi ah', waxaad bilaabi kartaa inaad dhisto waqtiga ay ku qaataan sanduuqooda.
Waa inaad ku gudubtaa oo keliya marxaladan marka eeygaagu ku faraxsan yahay inuu socdo gudaha iyo dibedda!
Habka ugu wanaagsan ee loo kordhiyo waqtiga sanduuqa waa in isaga lagu dhex quudiyo.
Waa inaad kubilaawdaa quudinta adigoo isticmaalaya qunyar-socod qunyar-socod ah, kong, ama lickimat oo ku jira sanduuqa. Markaad siiso cunnadiisa, dheh 'aqal kor' ama 'seexo'. In badan oo ku celcelis ah wuxuu baran doonaa macnaha ereyadan. Ku rid cuntada kaliya santuuqa gudihiisa si aad ugu bilowdo.
Cunto kasta, sii sii dheeree gudaha, laakiin hubi inaad albaabka u furan tahay.
Isticmaalka qunyar-socod qunyar socod ah ayaa hoos u dhigi doonta xilliyada cuntada, taasoo la micno ah inuu waqti badan ku qaato sanduuqa oo uu siiyo dhiirrigelin maskaxeed oo ka caawin doonta inuu daallan yahay!
Marka eeygaagu ku faraxsan yahay inuu cunnadiisa ka cuno qolka, waxaad hadda u gudbi kartaa albaabka oo la xiro:
Hubso in eeygaagu uu musqusha noqday.
Cunnadiisa ku rido qafiska, sug inta uu ka bilaabayo cunista oo albaabka aayar aayar uga xiro gadaashiisa.
Si dhow ula soco laakiin waxaan rajeynayaa inuu kaliya sii wadan doono cunista cunnadiisa.
Kusoo dhawaaw markan si aad u hubiso inuusan argagaxin meel kasta.
Albaabka u fur sida uu cuntada u dhammeysanayo si uu dirqi ugu ogaado in albaabka la xiray.
Cunto kasta ka dib tartiib tartiib ayey u dheereysaa waqtiga albaabku xiran yahay:
Cuntada # 1 : midna
Cuntada # 2 : 5 ilbidhiqsi
Cuntada # 3 : 10 ilbiriqsi
Cuntada # 4 : 15 ilbiriqsi
Cuntada # 5 : 20 ilbiriqsi
Cuntada # 6 : 25 ilbiriqsi
Cuntada # 7 : 30 ilbiriqsi
Cuntada # 8 : 45 ilbiriqsi
Cuntada # 9 : 60 ilbiriqsi
Cuntada # 10 : 90 ilbiriqsi
Cuntada # 11 : 120 ilbiriqsi
Cuntada # 12 : 150 ilbiriqsi
Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad si tartiib tartiib ah u shaqeyso eeyooyinka qaarkood, halka kuwa kale ay ku farxi doonaan inay dhaqso u socdaan.
Furaha ayaa ah la soco dhaqanka eeyahaaga.
Waxaan rabnaa nasasho, farxad iyo deganaan - halkii aan ka oori lahayn ama aan albaabka ku dhejin lahayn.
Haddii eeygaagu uu cuno, iska ilaali inuu banaanka u baxo. Wuxuu baran doonaa sida loo qayliyo si loo daayo! Sug waxoogaa aamusnaan ah ka dibna fur albaabka. Marka xigta ee aad quudinaysid, dib ugu laabo marxalad ama labo ilaa markii uu raaxaynayay, kahor dhismaha dib u dhiska.
Marka eeygaaga uu la qabsado 10 daqiiqo waxaad u dhaqaaqi kartaa inaad u dhaqaaqdo seddex tallaabo.
Tilaabada 3: Ku raaxeysiga Waqtiga Crate (Maalmaha 7-11)
Ka dib usbuucii ugu horreeyay ee tababarka sanduuqa, eeyahaaga waa inuu si farxad leh u cunaa cuntadiisa gudaha gudihiisa. Qaarkood hadda way fahmi doonaan tilmaanta 'seexo' sidoo kale.
Hadda waxaa la joogaa waqtigii lagu bilaabi lahaa jahwareerkiisa xilliyada cuntada ka baxsan. Si aad u bilowdo, ku dar hurdo hurdo caadi ah ( waa kuwan tusaale wanaagsan jadwalka tababarka sanduuqa).
Weydiiso eeygaaga inuu ‘seexdo’.
Markay gudaha galaan, amaano oo ku saydh qaar ka mid ah dawooyinka isaga si uu u cuno.
Xir albaabka gadaashiisa.
Si deggan u fadhiiso sariirta agteeda isaga oo la jooga daqiiqado yar.
Isagu waa inuu seexdo, haddii ay dhacdo si kooban waad u guuri kartaa.
Haddii uusan seexan, albaabka fur shan daqiiqo kadib oo ku celi 10-15 daqiiqo kadib.
Si dhow ula soco sida aad u rabto inaad goobjoog u ahaato markuu tooso.
Si tartiib tartiib ah u kordhi waqtiga uu ku qaato sanduuqiisa xilliyadan hurdada.
Samee tan maalmaha soo socda si aad u dhisto waqtiga uu ku qaato gudaha! Markuu raaxaysto, waad ku horumari kartaa inaad kaligaa isaga tagto.
Kac oo u dhaqaaq qolka xiga.
Shan daqiiqo kadib, ku noqo, ag fadhiiso markale daqiiqado ka dibna isaga sii daa.
Ku celi tan dhowr jeer maalintii!
Waxaad u baahan doontaa inaad dhisto waqtiga uu keligiis hadhay si tartiib tartiib ah.
Ku tababbar inaad ka tagto albaabbada kala duwan; ka bilow albaabka dambe, u gudub albaabka hore, ka dib qolka ku dheggan.
Tani waxay kaa caawin doontaa in la baro in markii aad ka soo baxdo albaabka hore aad ka tagto ‘dhab ah,’ ma aha wax sidaas u weyn!
Tilaabada 4: Ka Bixitaanka Guriga (Maalmaha 12-14)
Inaad ka tagto eeygaaga ee gurigaaga waxay noqon kartaa shucuur iyo walbahaar. Si kastaba ha noqotee, waa qayb ka mid ah nolosha caadiga ah eeyadeenuna waxay u baahan yihiin inay bartaan la qabsiga kelinimada.
Marka eeygaaga uu dhammeeyo tallaabada seddexaad, oo aad ugu nasan karto 30 daqiiqo adiga oo kula jooga qol kale, waad bilaabi kartaa cunuggiisa markaad guriga ka baxdo.
Ka bixitaanadani waa inay ku habboon yihiin inta u dhexeysa daqiiqadaha 30-40 marka hore (ka fikir safarka degdegga ah ee dukaanka, maahan maalin ka baxsan).
Hubso in santuuqa uu yahay mid raaxo leh oo leh laba boy-bayood oo aamin ah.
Weydiiso eeygaaga inuu 'goglan'.
Sii rushays ah oo daaweyn ah si aad ugu abaalguddo.
Kac oo guriga ka bax.
Iska ilaali inaad dhahdo 'bye bye', si deg deg ah oo deggan u bax.
Waa waxtar in la sameeyo kaamirada xayawaanka la korsado si aad u hubiso in eeyahaagu ay nabad qabaan inta aad ka maqantahay guriga. Kamarad ayaa sidoo kale kugu hagi doonta marka ay timaado kordhinta waqtiga uu isagu isagu u yahay. Hadduu hurdo inta badan ee aad maqantahay, waad kordhin kartaa waqtiga!
Markaad ku noqoto gurigaaga, ku salaamo eeygaaga si deggan (ha u kulmin shucuur badan), u daa iyaga inay ka soo baxaan sanduuqooda oo u kaxee ardaaga nasashada musqusha.
Tilaabada 5: Tababbarka Sanduuqa Habeenkii (Maalinta 14+)
Barida eyda inuu ku seexdo santuuqa habeenimadii waa muhiim si looga fogaado shilalka ama calalin markii aan la kormeeri karin.
Marka hore ku bilow santuuqa qolka jiifkaaga (sifiican sariirtaada agteeda).
Intaas waxaa sii dheer, ku taageer taabasho af iyo adin ah habeenki ilaa uu hurdo.
Dhegeyso cabaadka habeenka saq dhexe maxaa yeelay tani waxay tilmaamaysaa in musqusha loo baahan yahay. Filo nasashada suuliga saqda dhexe afarta ilaa siddeedda toddobaad ee ugu horreeya.
Inta lagu guda jiro labada wiig ee ugu horreeya eeyahaaga, diiradda saar tababarka sanduuqa ee kor lagu soo sheegay inta lagu jiro maalinta.
Maaddaama uu kalsooni ku qabo tababarka sanduuqa maalintii, waxaad bilaabi kartaa inaad u guurto sanduuqiisa oo aad uga sii fogaato fiidkii.
Eeg annaga qaybta cilad bixinta haddii eeygaagu habeenki halgamayo!
Jadwalka Tababbarka Eeyaha
Ku soo galida eeygaaga jadwal caadi ah waa fikrad fiican. Waxay hubin doontaa in eeyahaagu u baxaan xilliyada nasashada ee musqusha ( taas oo ka dhigi doonta raashinka guriga mid aad u dhaqso badan ) wuxuuna baraa eeygaaga inuu barto waxa laga filayo iyo goorta.
Ku dhaganaanta nidaamka caadiga ah waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad hubiso in eeygaaga uu helayo hurdo ku filan. Waqtiyada xashiishka waa muhiim inaad iska ilaaliso eey aad u daal badan.
Raac jadwalkayaga hoose oo dhis tababarka maalin kasta:
Jadwalka Joogitaanka Guryaha Waalidiinta
7-9 subaxnimo Sii daa, suulku jabo
Cuntada ku dhex jirta santuuqa
Waqti ku ciyaar si bilaash ah qalinkooda Ka bilow albaabku oo furan
9-11am Musqusha oo la jebiyo
Ku dhex rid cunug yar ee cunnuga leh kong (oo ay ka buuxdo ½ Cunto)
Ka tag hurdo Adeegso ereyga baaqa ah 'seexo' markii la aasaaso
Albaabku wuu xidhan yahay
11-1pm Sii daa, suulku jabo
Fadhiga tababarka (dib u yeer / fadhiiso iwm)
Cuntada ku jirta sanduuqa Albaabka u fur
1-3pm Musqusha jebinta ka dib waqtiga nasashada Adeegso ereyga baaqa ah 'seexo' markii la aasaaso
3-5 galabnimo Sii daa, suulku jabo
Cuntada ku dhex jirta santuuqa Albaabku wuu xirmay inta lagu gudajiray cuntada
5-7pm Musqusha oo la jebiyo
7-9pm Sii daa, suulku jabo
Waqti ku ciyaar fursad aad qalinka ku heli karto
Waqtiga firaaqada Albaabka u fur
9-11 habeenimo Musqusha oo la jebiyo
Waqtiga jiifka Sariirta ag dhig sariirta dhinaceeda labada toddobaad ee ugu horreysa
Jadwalka loogu talagalay waalidiinta shaqeeya
6-8am Sii daa, suulku jabo
Cuntada ku dhex jirta santuuqa Ka bilow albaabku oo furan
8-10am Musqusha oo la jebiyo
Ka tag hurdo Kormeeraha fiidiyowga si loo hubiyo horumarka / hubi calaamadaha walaaca
10-11am Booqdaha wuxuu hubiyaa eey
Sii daa, suulku jabo
Dib-u dejinta qashinka Hubso in cunugga yar ee sitaa uu isku mid noqon karo
11-12pm Musqusha oo la jebiyo
12-1pm Sii daa, suulku jabo
Fadhiga tababarka (dib u soo celinta / fadhiiso iwm)
1-3pm Musqusha oo la jebiyo
3-4 galabnimo Booqdaha wuxuu hubiyaa eey
4-5 galabnimo Musqusha oo la jebiyo
Tababbarka sanduuqa eey faa iidooyin badan ayuu leeyahay . Waxay kaa caawinaysaa in la helo meel aamin ah oo ka hortageysa dabeecadaha aan la jeclayn sida musqusha guriga.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xeerar muhiim ah oo ay tahay inaad ku dhegto markii tababarka sanduuqa . Ku dhaganaanta sharciyadan waxay kaa caawin doontaa hubinta in eeygaagu aanu dareemin walaac ama jahwareer:
Hubso inay weyntahay. Eygaaga yar waa inuu awood u leeyahay inuu si xor ah u dhaqdhaqaaqi karo, beddeli karo jiifka hurdada, ka seexdo sariirta haddii ay rabaan, haysato alaabta carruurtu ku ciyaarto iyo baaquli biyo ah.
Ka dhig mid jilicsan oo jilicsan. Sariir aad ugu weyn eey yar yar oo ay isku fidin karto oo busteyaal badan leh ayaa hubin doonta in eeygaaga uusan si fudud u dhibsan karin marka uu nasanayo.
Waligaa ha ku qasbin eeyahaaga sanduuqa gudihiisa! Tani waxay abuuri doontaa walaac ama jahwareer ku xirnaanshada rabitaankooda waxayna dib u dhigeysaa tababarkaaga.
Ha la falgelin eeyahaaga inta ay ku jiraan gudaha santuuqdooda. Ha u oggolaan carruurta inay dhex gurguurtaan, ama ay isku dayaan oo ay la ciyaaraan eeyahaaga markay gudaha ku nasanayaan.
Waa in mar uun loo isticmaalaa in lagu xadeeyo eey yar muddo gaaban. Markaad tababarto, ha ka badnaan 3 saacadood nasasho la’aan.
U isticmaal maalinta koowaad, tani waxay kaa caawin doontaa eeygaaga inuu la qabsado oo uu raadsado badbaadada sanduuqa goor hore.
Ha iloobin oohinta ama cabaadka. Sug wax yar oo farqi ah ka dibna sii daa eeygaaga dibadda. Ma dooneyno eeyku inuu barto in xayiraaddu tahay wax xun.
Weligaa ha u isticmaalin qaab ciqaabeed.
Ku soo koobida eeyahaaga kahor intaysan baran inay ku raaxaystaan. Tani waxay u horseedaa walaac ama jahwareer waxayna keentaa cabaad, cabaad, ama oohin ama xoqitaanka irridda.
Ku tiirsanaanta santuuqa si aad eygaaga u nabad gasho. Waa in aan loo isticmaalin si xad dhaaf ah maxaa yeelay ma heysatid waqti aad ku madadaasho, ku tababarto, kula dhaqanto, ama aad ula ciyaarto eygaaga.
Isku dayida inaad ku deg degto tababarka sanduuqa. Waa inaad waqti gelisaa inta lagu jiro toddobaadyada ugu horreeya oo aad si tartiib tartiib ah wax u qabato.
Ku abaalmarin eeyahaaga ilkahaaga isagoo u fasaxaya inuu baxo. Hadaad u ogolaato inuu soo baxo markuu cabaadayo, waxay u badan tahay inuu ciyo.
In aanad ku quudin cuntada sanduuqa. Waqtiyada cuntada waa fursada ugu fiican ee lagu horumarin karo ururo wanaagsan. Ha moogaan!
Dhibaataynta Dhibaatooyinka: Su'aalaha Badanaa La Isweydiiyo
Ma Qiyaami Karaa Eygayga Habeenkiisa Koowaad?
Haa. Waa fikrad fiican inaad ubadkaga caado u siiso inuu seexdo sagxadkooda habeenki maalinta kowaad.
Si kastaba ha noqotee sida looga wada hadlay qaybta 'tababarka sariirta habeenkii', waxaad u baahan doontaa inaad tan ku taageerto inta ugu badan ee suurtogalka ah joogitaankaaga jir ahaaneed iyo is dhexgalka hadalka hadalka ah.
Eeygeygu Wuxuu Ka Qeylinayaa Sanduuqyadiisa Habeenkii
Haddii eeygaagu ku dhex ciyaaqayo sanduuqyadiisa habeenkii, marka hore laba jeer ka hubi dhakhtarkaaga xoolaha inuu isagu taam yahay oo caafimaad qabo.
Haddii eeyahaagu qaylinayaan raac annaga talaabo talaabo talaabo ah kor ku xusan . Oohin, cabaad, ama oohin ayaa dhammaantood ah calaamado aad ku deg degtay geedi socodkii tababarka sanduuqa.
Eygaygu Ma Geli Doono Sanduuqyadooda
Haddii eeyahaagu aad uga walaacsan yahay sanduuqa, ha ku qasbin arrinta.
Talaabooyinka koowaad iyo laba ku hay tilmaamahan muddo dheer. Tani waxay gacan ka geysan doontaa dhisidda kalsoonidooda ka hor inta aan lagu darin tababarka sanduuqa.
Iska yaree shanqadh kasta oo santuuqa sameeya marka la guda galo adoo bustayaal ku hoosta ku garaacaya hoosta.
Waxaad sidoo kale ku dabooli kartaa qafiska buste jilicsan, si ay ugu fududaato inaad gudaha gasho. Waxa kale oo lagugula talin karaa inaad isticmaasho alaabada pheromone sida Adaptil, maxaa yeelay tani waxay ka caawin kartaa eeyooyinka inay fahmaan inay nabad qabaan.
Waxa La Sameeyo Marka Aad Xasaasiyad Ku Leedahay Xayawaankaaga
Shaybaarka qalin: Macluumaadka Taranka Eeyaha iyo Tilmaamaha Mulkiilaha
sida loo dhejiyo suunka eeyga tallaabo tallaabo
xidhashada suunka eyda
sidee loo xidhaa suunka eey yar
naag qurux badan oo chihuahua magacyo
isku darka adhijirka jarmalka iyo husky